CGM : hanolotra soradihy roa i Gwen, i Saroy ary i Miangaly | NewsMada
CGM : hanolotra soradihy roa i Gwen, i Saroy ary i Miangaly
Par Taratra sur 27/09/2017
Marobe ireo hetsika manodidina ny dihy ankehitriny, amin’izao fotoana izao. Hiavaka kosa ny etsy amin’ny CGM, ny asabotsy izao. Tonga eto i Gwen Rakotovao ka hiaka-tsehatra miaraka amin’i Saroy Rakotosolofo sy i Miangaly.
Manam-piniavana hiara-hiasa ireo tanora malagasy mpanao soradihy, izay azo lazaina ho efa samy sangany daholo. Sarotra anefa ny hahatongavana amin’izany noho ny fandaharam-potoana samy manana ny azy, araka ny andraikitra sahaniny avy. Eo koa ny elanelan-tany, satria misy ireo efa nifindra monina any ivelany any.
Araka izany, sarobidy sy tsy manam-paharoa ny seho hotanterahina, etsy amin’ny Cercle germano-malagasy (CGM) etsy Analakely, ny asabotsy tolakandro izao. Hifandimby hiaka-tsehatra ao i Gwen Rakotovao, malagasy mpanao soradihy, monina any Etazonia, efa manana ny toerany amin’ity sehatra ity, sy i Saroy Rakotosolofo, tsy zovina intsony, mpitarika ny kaompania Zarasoa ary mpampianatra dihy ao amin’ny CGM. Arahin’i Miangaly, mpihira sady mpitendry, eo amin’ny mozika.
Hanolotra soradihy roa izy ireo. Hanokatra ny sehatra i Saroy sy i Miangaly amin’ny « Human », noforonin’i Saroy, tamin’ny taon-dasa. Hampiavaka ity soradihy ity ny nanafangaroan’ny mpamporona azy ny dihy « rombo » sy ny « tape-danse ». Karazana dihy mitovitovy amin’ny « claquette » ito farany, raha ny fanazavan’i Saroy. Ankoatra izany, tsy hitendry sy hihira fotsiny i Miangaly, ao anatin’ity piesy ity, fa handray anjara amin’ny dihy ihany koa.
« Esperanto » kosa no lohatenin’ny soradihy hoentin’i Gwen Rakotovao. Tanteraka ny faniriany ! Isika eto Madagasikara no hahitana voalohany ity sanganasa, noforoniny tamin’ny herintaona, ity. Raha fintinina, maneho ny fiainan’ny olona iray, nandao ny tanindrazany sy nifindra monina any an-tany lavitra, ity piesy ity.